Ciidamada Beelaha (Muumin Aadan) Oo Magaalada Bur-saalax Gudaheeda Iyo Hareeraheeda Ciidan Xoog Leh Dhigay – Codka Qaranka Tanadland
Magaalada Bur-saalax iyo tuulooyinka ku xeeran oo dhan waa degaan reer Tanadland. Walow ay jirto in 10 kii sanaddood ee ugu danbeeyey magaalada ay la soo degeen beesha (Muumin Aadan) qoysas yar oo yar-yaroodka Habar-majeerteen ah. Magaalada Bur-saalax Habar-majeerteen magaalo ay xataa hadii lagu laayo ay far dhaqaajin karaan maaha. Maadaama degaamada iyo jidadka soo gala bur-saalax oo dhan ay yihiin degaamo ay degto beesha (Muumin Aadan). Hadaba iyadoo beesha (Muumin Aadan) ay owalba u qorshaysnayd inay qoysaska mahbarka ah ee magaalada Bur-saalax martida ku ah, intay karbaashaan oo inay magaalada ka saaraan. Ayaa hadana waxaa habeenkii xalay ahaa dhacday, in beesha Habar-majeerteen ay shirqool ku dileen taliyihii ciidamada booliska ee gobalka Xariir (G/Sare Cabdixamiid Warsame Cilmi).
Shirqoolku Siduu U Dhacay:
Xalay goor fiidkii ah ayaa magaalada Gaalkacyo waxaa soo gaarey (G/Sare Cabdixamiid Warsame Cilmi) iyo ilaalo la socota, waxayna modo cabaar ah ay joogeen guri ku yaala xaafadda Horumar. Dabeed (G/Sare Cabdixamiid) ayaa ilaalo diisii wuxuu ku yiri cabaar baan idinka maqnaana hayaaye meeshiina igu sii suga.
Saakay aroortii hore ayaa beesha (Muumin Aadan) ay hareeraysay magaalada Bur-saalax. Si aan wax nafar ah oo beesha habar-majeerteen ahi uusan magaalada uga bixin una soo gelin. Gudaha magaaladana waxay isugu geeyeen ciidan xoog leh. Taliye (G/Sare Cabdixamiid Warsame Cilmi) oo aysan wax ilaalo ah la socon ayaa waxaa diley 3 nin oo Habar-majeerteen ah iyo nin yibir saalax ah. Beesha habar-majeerteen ayaa hada waxay ku baryootamahayaan in aan dadka maatada ah laga xasuuqin ee martida ku ah Bur-saalax. Oo la siiyo mudo gaaban oo ay ku soo wareejiyaan 4-ta nin oo gacan gu dhiigleyaasha ah. Sidoo kale beesha Habar-majeerteen waxaa looga fadhiyaa nimankii jidka u galay oo dhaawacay 3-da nin ee magaalada Bur-saalax ka baxay, oo ay u jeedadoodu ahayd in taliye Cabdixamiid ay maydkiisa wadada ka soo qaataan.
Taliye (Cabdixamiid) isagoo marahaya wadada Halabooqad ee dhex marta xaafadda Israac, ayaa waxaa arkay niman Habar-majeerteen ah. Niman kaasi waxay arkeen in uusan ilaalo wadan. Dabeed (Cabdixamiid) wuxuu yimid koontaroolka halabooqad al kaas ay isku waraysteen ciidanka reer Tanadland ee koontaroolka jooga. Dabeedna wax yar markuu ragii la taagnaa wuxuu soo qaaday wadada Halabooqad.
Halkaas markay arintu marayso ayaa nimankii Habar-majeerteen ee (Cabdixamiid) ay horay isku arkeen, waxay la soo hadleen nin mahbar ah oo raga jooga koontaroolka Halabooqad ka mid ah. Niman kaasi nin kaas waxay weydiiyeen in (Cabdixamiid) uu dhanka Galdogob uu aadey iyo in uu soo noqday. Nin kaasi wuxuu u sheegay nimankii in uu (Cabdixamiid) u gudbey dhanka Galdogob. Dabeed nimankii Habar- majeerteen gaari ayey ka soo dabo qaateen si ay dhexda ugu dilaan (Cabdixamiid). Laakiin (Cabdixamiid) waa u gartay in la cayrsanayo oo waa u ka baxsaday nimanii cayrsanayey. Nimankii Habar-majeerteen intay ka hareen ayey waxay la hadleen niman magaalada Bur-saalax jooga oo ay isku cid yihiin. Waxayna fareen inay jid-gooyo u dhigtaan (Cabdixamiid) oo ay dilaan. Waxay kaloo u sheegeen in uu kaligigiis yahay oo aysan ilaalo la socon.
Taliye cabdi xamiid wuxuu ahaa nin geesi ah. Markuu marahayo meel u dhow magaalada Bur-saalax ayuu ku soo baxay maleeshiyadii jid-gooyada u dhigtay, mar kaas ayey isla mar kiiba ay rasaas ku bilaabeen. Laakiin xoog ayuu ku jiiray oo waa u dhaafay. Markii uu dhaafay oo uu meel dhexe sii socdo ayaa hal xabad ahi waxay uga dhacday jeegada. Goorta la diley taliye (Cabdixamiid) oo ahayd saqdii dhexe ee xalay. Ayaa isla markiiba waxaa shacabka reer Tanadland ee magaalada Bur-saalax degani ay ka war heleen, in rasaasta ay dhawaaqeeda ku tooseen ay ahayd dilkii taliye (Cabdixamiid). Mar kaas ayaa 3 nin waxay aadeen magaalada Bur-saalax meel gudaheeda ah, oo ay ku malaynahayeen nimanka taliye (Cabdixamiid) diley. Niman kaasi waxay ahaayeen 3 nin oo hal gaari wata. Taasi waxay muujinaysaa inaysan niman kaasi aysan dagaal u socon. Mideeda kale gaariga ay wateen nalka ayaa u shidnaa. Hadaba nimankii Habar-majeerteen oo ahaa 10 nin markii ay arkeen gaariga ku soo socda nal kiisa ayey tacshiirad ku bilaabeen. Hal kaasna waxaa ku dhaawacmay isla mar kiiba 3 dii nin. Dabeed nimankii sadexda ahaa waxaa u soo gurmadey ciidan kale oo magaalada Bur-saalx ka soo baxay. Intaas ka dibna xabaddii waa ay istaagtey.
Heshiiskii Galabta Iyo Saamayntiisa
Beesha (Muumin Aadan) oo degta magaalada Bur-saalax iyo tuulooyinka hareeraha ka xiga oo dhan, waxay isla xalay saqdii dhexe ay ciidan soo dhoobtay Bur-saalax iyo hareeraheeda. Si aan magaalada wax mahbar ah oo gala ama ka baxa aysan u jirin. Saakay subaxii hore waxaa magaalada Bur-saalax ka dhacay shir beesha Habar-majeerteen looga dalbaday inay nimanka dilka taliyaha iyo dhaawaca 3 nin loo soo gacan geliyo. Beesha Habar-majeerteen waxay codsadeen in wakhti 5 saacadood ah la siiyo. Maantay duhurkii ayaa shir kale laysugu yimid Bur-saalax. Shirkaan danbe waa lagu kala boodey markii beesha Habar-majeerteen ay la soo shir tageen rayi ah gacanku dhiigleyaasha waaxnu u gudbinaynaa magaalada Garoowe si loogu toogto. Dabadeed beesha (Muumin Aaadan) ayaa waxay ku goodiyeen, in habar-majeerteen ay Bur-saalax magan ugu yihiin beesha (Muumin Aaadan), uuna magaalada xasuuq ka dhacahayo hadaan nimanka gacan ku dhiigleyaasha ah aan si dhaqsaa loogu soo gacan gelin. Mar kaas ayey waxay yiraahdeen “beri subax ayaanu idinku wareejinaynaa ee intaas nuugu dul qaata”.
Laakiin muhiimaddu waxa weeye in beesha (Muumin Aadan) ay ka go’an tahay inay beesha Habar-majeerteen ay ka sifeeyaan bur-saalax iyo dhawr tuulo oo kale. Arinta kale ee soo korodhay waxa weeye, wadada halabooqad
hadii reer Tanadland ama Habar-majeerteen dad looga laayo waxaa islamar kiiba la tuhmijirey beesha Sacad. Balse qaabka beesha Habar-majeerteen ay u shir-qooshay taliye (Cabdixamiid), waxaa la oran karaa waa qaab cusub oo dooxatayn ah. Dad badanina ay ku qur-bixi doonaan dooxatayn taan nooca cusub ah.